Xuquuqaha iyo waajibaadka ee guurka | Samfunnskunnskap.no
Qoraal sharciga guurka:
Dhammaan dadka ka weyn 18 sanno ee aan xaas laheyn, si sharci ahna u deggan Norwey waa ku guursan karaan halkan.
Guur oo dhami waa inuu xorriyad noqdo. Ragga iyo dumarkuba waxey leeyihiin xuquuq isku mid ah oo ay ku guursan karaan qofka ay rabaan. Sharciga ciqaabtu wuxuu dhigayaa qofka xadgudub, afduub, cadaadin ama hanjabaad ku qasba cid inay guursadaan, wuxuu muteysan karaa xabsi ilaa 6 sanno ah. Qofka la jira isagana sidaas oo kale ayaa loo ciqaabayaa.
Haddii qofku uu go’aansado inuu ka guuro xaaskiisa wuxuu codsan karaa kala maqnaansho. Marka mudo sannad ah la kala maqnaado, wuxuu qofku heli karaa furriin. Haddii aan kala maqnaansho la codsan, hase yeeshee la kala noolaado labo sanno, markaa waxa la heli karaa furriin. Ragga iyo dumarku waxey leeyihiin xuquuq isku mid ah markay noqoto codsashada kala maqnaanshaha iyo furriinkaba.
Xaasku wuu codsan karaa furriin isaga oo aan marka hore codsan kala maqnaansho, haddii qofka kale u geystey iskuday dil, gacankahadal, ama faraxumeyn halis ah ama cabsigelin. Sidoo kale qofku wuu codsan karaa furriin haddii marka hore khasab loogu guuriyey. Waxa jira xuquuqo la xidhiidha helid sharci dal-ku-joog, haddii qofku kaga baxo guurka sababahaas ku saleysnaa.
Dadka isqaba waxa saaran masuuliyad isku mid ah xagga masruufka iyo ilaalinta qoyska. Waxey masuul ka wada yihiin dhaqaalaha qoyska, waxa kala oo ey masuul ka wada yihiin shaqada looga baahan si reerku si fiican ugu wada noolaan lahaa. Laakiin siyaabo kala duwan ayey u sameyn karaan sidan. Waxey noqon kartaa in lacag la soo shaqeeyo, shaqada guriga oo wax laga qabto, ilaalinta carruurta iyo si kale. Xaasku marmarka qaarkood wuxuu ka kale ka codsan karaa lacag si uu daboolo kharashyada lagama maarmaanka ah. Xeerka qoyska godobka 39 aad wuxuu dhigayaa iney tahey waajib in qoysku isu sheegaan dhaqaalahooda. Tusaale ahaan Xaasku wuxuu weydiin karaa ka kale inuu tuso koobiga waraaqda xisaab xidhka sannadkii (selvangivelse), lacagta bangiga taal i.w.m.
Yaa iska leh waxa reerka isqabaa heystaan? Waxyaalaha qofku hore u heystay guurka ka hor isaga ayaa iska leh guurka kadib. Waxa kale oo qofku gooni u leeyahey waxa uu dhaxlo ama hadiyad lagu siiyo ka dib markuu guursadey, waxa kale oo uu qofku iska leeyahey waxa uu isagu iibsado. Waxyaalaha qoysku wada iibsadaan ama guriga u soo iibiyaan way wada leeyihiin.
Sharciga guurka wuxuu xaddidaa arrimaha guurka. Lammaanaha wada deggani ma laha xuquuqaha iyo waajibaadka la mid ah kuwa ay isku leeyihiin kuwa isqabaa. Lammaanaha wada deggani markaa waa in ay heshiis u gaar ah galaan.